ချစ်သောဧရာဝတီ (ဆောင်းပါးရှင် မောင်မောင်ဝမ်း) ~ ဒီမိုဝေယံ
ဧရာဝတီဟာတခါက ကျနော့်အပေါ် အငြိုးဒေါသကြီးခဲ့ဘူးတယ်…။ ဒါကလည်း ကျနော်က ရန်သွားစတာကိုး… တကယ်တော့… သူဟာစိတ်ရင်း အလွန်ကောင်းပြီး.. သဘောထားမြင့်မြတ်သူပါ… ကျနော် ၁၂နှစ်သားလောက် ကျနော့်အဖေဇာတိ မိုးညိုမြို့နယ်အပိုင် ထိန်တောရွာလေးကို အလည်လိုက်သွားရာက… ဧရာဝတီမြစ်ထဲကို ရေဆင်းကူးတော့.. သူကကျနော့်ကို ဒေါသတကြီးနဲ့ ဆုံးမလွှတ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ကို သူမသတ်ဘူး… ကတိတခု တော့တောင်းတယ်… မင်းအသက်ကို ငါကယ်လိုက်ပြီတဲ့။ ငါ့ကိုလည်း ရန်ရှာနေတဲ့ သူတွေရှိတယ်…. ငါ့ကိုလည်း ပြန်ကယ်ပါတဲ့။ အော်ဧရာဝတီရယ် သင်ဟာလူများစွာကို ကယ်တင်နေတဲ့သူ လူများစွာရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို သယ်ပိုးနေတဲ့သူ။ သင့်ကိုဘယ်သူမှ ပစ်မထားဘူး….။ (ကျေးဇူး မသိတတ်သူများက လွဲရင်ပေါ့)။
ဒါပေမဲ့ဧရာဝတီ… ခွင့်လွှတ်ပါ.. ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ.။ ကျနော်သင့်ကို မေ့နေတာကြာသွားပြီ.. တနေ့ကမှ ညီငယ် ဗမာ့သွေးက အထိပ်တလန့် တီးတိုးရေရွတ်သံနဲ့ လှမ်းပြောရှာတယ်။
“ အကို …ဧရာဝတီအခြေနေမကောင်းဘူး…၀ိုင်းကယ်ကြဦး ” တဲ့
ကျနော် ကြက်သီးတွေ ထသွားတယ်။ သတင်းတွေထဲမှာ ဖတ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့.. အာရုံက အဲဒီ့ဘက် သိပ်မရောက်မိတော့ မေ့မေ့လျှော့လျှော့ ဖြစ်သွားတယ်… တကယ်တော့… ဧရာဝတီဟာ ကျနော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်… အမိမြန်မာနိုင်ငံ သားတွေရဲ့ အားထားရာ ပင်မသွေးကြောကြီး ရင်နှင့်အမျှ ခံစားရပါတယ်။ ယန်စီ(တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြစ်ကြီး) ကိုတော့အလှအပ ပျက်မှာဆိုးလို့။ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ထားပြီးတို့.. မိခင်ဧရာဝတီကိုမှ ရန်လာရှာရသလားဗျာ…. ကိုချိုတူးဇော်ရေးတဲ့ စာလေးကို သွားသတိရတယ်။ အကျိုးအမြတ်ရတိုင်း လုပ်သင့်သလားတဲ့ အကျိုးအမြတ်ရလို့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို ထုတ်ရောင်းမယ်ဆို သင့်တော်ပါ့မလားတဲ့ သိပ်မှန်လိုက်တဲ့စကား။
အမေရိကံပြည်ထောင်စုရဲ့ မြေလွှာအောက်မှာ သယံဇာတတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ရေနံတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့.. သူတို့မိခင်မြေကြီးကို တူးဆွဘို့အခွင့်ရေး မပေးဘူး။ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ ပျက်သုဉ်းပြီး လူသားတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှာဆိုးလို့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မျက်စိတဆုံး ကျွန်းသစ်စိုက်ခင်းကြီးတွေရှိတယ်။ ဘယ်သူမှမခုတ်ဘူး။ တို့ပြည်တွင်းထဲက ကျွန်းတွေကိုတော့ ခုတ်ယူသွားတယ်။ ခုတ်ခွင့်ပေးတဲ့ သူတွေကလည်း ပေးနေတာကိုး အတွေးအခေါ် အမြှော်အမြင်ရှိသူများက ပညာကိုရောင်းစားပြီး တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်တယ်။ အတွေးအခေါ် အမြှော်အမြင်မဲ့သူများက… သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကို ရောင်းစားပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက် အလုပ်လုပ်တယ်…. ဒီတခါက… မိခင်ဧရာဝတီရဲ့ အလှည့်များလား
တခါက မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ လက်ထက်မှာ… အစ္စရေးပညာရှင် တဦးကပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရဲ့ အလယ်တဲ့တဲ့မှာ… ဧရာဝတီဆိုတဲ့ မြစ်ကြီးကဖြတ်စီးနေတာ… ခင်ဗျားတို့ ချမ်းသာအောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလားတဲ့။ ဧရာဝတီရဲ့ တန်ဘိုးဟာ အဲသလောက်ကြီးပါတယ်……
စာရေးဆရာမောင်သိန်းဆိုင်ရဲ့ နှလုံးသားထဲက ဧရာဝတီ
အဆိုတော် ရီရီသန့် ရဲ့ ဧရာဝတီ
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး---------- ဧရာဝတီ
ကိုယ်ကျိုးရှာ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ကွန်မြူနစ်ဇာတ်ပျက် တရုတ်အစိုးရတို့ ပေါင်းပြီး အသေသတ်ကြတော့မယ်…..တို့ဘာလုပ်ကြမလည်း………
ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြမလား…ဧရာဝတီဟာ ရန်သူ့လက်ထဲမှာ လူးလွန့်ပြီး.. အသင်တငင်ငင်နဲ့ ရှိနေတာကို…. လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာလား……..